09 / 07 / 2019 | RayHaber | raillynews
Maalinta: 9-ka July, 2019
Badeecada Ganacsiga ee laga soo bilaabo Bursa ilaa Yurub
Turkey-EU Dialogue Business Project, diyaariyeen Bursa Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha 'Fursadaha ee Sector Automotive dhexeeya Turkey iyo Midowga Yurub ay si aad u ogaato iyo rakibi Bridges' mashruuca waxaa lagu qabtay shir furitaanka. Midowga Yurub [More ...]
GEFCO waxay aqbashaa dacaayad ay ku qaadato gaadiidka dhijitaalka ee heerka xiga
Khabiir caalami ah oo ku saabsan xallinta silsiladda saadka iyo hoggaamiyaha saadka agabyada gawaarida, GEFCO Group ayaa shaacisay helitaanka Chronotruck, oo isku xira odayaasha iyo gaadiidleyda qalab casri ah oo casri ah. Iibsashadaan, [More ...]
TCDD 3. Maamulaha Gobalka Koçbay ayaa sameeyey Booqashooyin kala duwan
TCDD 3. Maamulaha Gobolka Selim Koçbay, Maamulaha Guud ee IZBAN AŞ Seçkin Mutlu iyo IZBAN AŞ Agaasimihii Guud ee Agaasimaha Sönmez Alev, Maamulaha Guud ee Tilmaamaha Tareenka Bilgin Recep Bekem, Maamulaha Guud ee TCDD [More ...]
Qunsuliyada Serbia ee Istanbul Nenad Aleksic booqday TÜVASAŞ
Nenad ALEXIKIC, Consum ee Serbia ee Istanbul, waxay u timid Sakarya martiqaadkii Duqa Serdivan Yuusuf Yuusuf ALEMDAR. Ka dib shirarka magaalada Serdivan, la-taliyaha iyo wafdiga la socda ayaa booqday TÜVASAŞ. qunsulka [More ...]
Diyaargarowga tartanka World Motocross Jadwalka
Xafiiska Afyonkarahisar Governor ee taageera Madaxweynaha bacdi ee degmada ee Afyonkarahisar iyo Turkey Baaskiilka Federation oo lagu qaban doono magaalada our on iskaashiga 6-7 8 September 2019-date World Championship stadian, ka hor inta diyaarinta waxaa sii xawaare buuxa. Duqa Magaalada [More ...]
Wareegidda qaybta Gaadiidka Labaad waa sii socotaa!
Iyada oo loo baahan yahay in khibradda loo leeyahay suuqa baabuurta la adeegsaday, kalsoonida u dhexeysa kuwa wax iibsada iyo iibiyaasha ayaa la hubiyaa oo dhibaatooyinka qaybta waa ay si dhakhso leh hoos ugu dhacaan. Maalgashi shirkadaha shirkadaha ee haysta shahaadooyinka adeegga lagama maarmaanka ah [More ...]
THY's Maçka Flight ayaa u duulay magaalada Trabzon oo xasuusta Sehit Eren Bülbül
Diyaaradda THY Maçka waxay u duushay magaalada Trabzon iyadoo lagu xasuusto Şehit Eren Bülbül. , Turkish Airlines (THY), Boeing 787-9 Dreamliner, oo lagu daro qeyb cusub oo duulimaadkeeda ah oo la yiraahdo 'Maçka' oo lagu xasuusto Eren Bülbül, oo shahiiday, [More ...]
Hawlaha Dhismaha Wadooyinka ee Miyiga Eskişehir ayaa sii socda. Dawlada Hoose ee Magaalada Eskişehir, oo muwaadiniinta ka dhigaysa inay dhoola cadeeyaan bartamaha magaalada iyo baadiyaha howsha ay qabatay, waxay kusii socdey dhismaha wadada, dayactirka iyo hagaajinta xawaare xoogan. [More ...]
Ka shaqaynta Adana Gaadiidka Inc. Ka muuqashada, ATM-yada ku nool Azerbaijan ayaa u muuqday! Adana Magaalooyinka Magaalada; si ay u bixiso mushaarka shaqaalaha, si ay u sii wadaan gaadiidka dadweynaha ee adeega, sii wadida wax-soo-saarka cuntada iyo u adeegidda [More ...]
Dowladda Hoose ee Antalya, oo ku taal waqooyiga Alanya Gedevet Plateau wadada Kizilalan waxay dhammeystirtay dayactirka iyo hagaajinta shaqada. Markii la dhammaystiro dariiqa, darbiga iyo dariiqyada iyo buuxinta shaqooyinka, dhul-gariir iyo dumin [More ...]
Ortaca Dalyan Road Waxay Adeeg Cusboonaysiisaa Fudud Cusub
Dawlada Hoose ee Magaalada Muğla 2017 ee 1. Wuxuu dhammeystirey marxaladda shaqo-joojinta Ortaca Dalyan 2. Marxaladda ayaa la soo gabagabeeyey oo loo soo bandhigay muwaadiniinta. Inta lagu gudajiray baaxadda barnaamijka sanadka ee 2017, qiyaastii xNUMX kiiloomitir wadada Wadada Ortaca Dalyan [More ...]
Maradona Erciyes Ultra Dhamaan
International Erciyes Ultra Sky Trail Mountain Marathon, oo u dhacday 4 sannadkan, ayaa indhaha u rogeysa bulshada orodka ka socota adduunka oo dhan una rogaya Erciyes. Erciyes noqday mid ka mid ah tartanka ugu muhiimsan dalka ee Ultra Marathon Turkey Mountain [More ...]
Xakamaynta xawaaraha ee Basaska iyo Gawaarida Gaadiidka ee ka socda UK UKO
Xarunta Isuduwaha Gaadiidka Dawladaha Hoose ee Magaalada Konya (UKOME), xeerarka xawaaraha ee waddooyinka, sababta oo ah hoos u dhaca basaska taraafikada iyo nooca nooca xamuulka ah si go'aan looga gaaro xaddida xawaaraha. gaar ah [More ...]
Nidaamka Isgaadhsiinta ee Magaalada Square Square
Nidaamka Tareenka ee Magaalada Mooshinka Magaalada: Bursa Metropolitan ayaa ku dhawaaqday in gawaarida la xakameyn doono natiijada shaqada ee magaalada Square - qaabka tareenada tareenada. Mashruucan waxaa soo diyaariyey Wasaaradda Cilmi Baarista ee Magaalada Bursa [More ...]